हतियारको चिन्तै नगर्नुस्, युथफोर्सलाई कसैले छोएमात्रै अरिगांल जसरी जाइलाग्छौँ : महेश बस्नेत | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
हतियारको चिन्तै नगर्नुस्, युथफोर्सलाई कसैले छोएमात्रै अरिगांल जसरी जाइलाग्छौँ : महेश बस्नेत
२०७८ साउन २, शनिबार, ५: ०२PM
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद तथा नेता महेश बस्नेतले युथफोर्सलाई कसैले छोए आफूहरु अब अरिगांल जसरी जाइलाग्ने बताएका छन् । उनले आज उपत्यका भित्रका युथफोर्सका अगुवा कमाण्डरहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो । उनले अब युथफोर्स प्रत्येक वडासम्म गठन हुने बताए ।
प्रशिक्षणको क्रममा उनले युवासंघले युथफोर्समा संगठित भएका सबैको जिम्मा लिनेपनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले युथफोर्समा रहँदा कुनै पनि साथीहरुलाई अंगभंग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय युवा संघले सबै उपचार गर्ने पनि बताए । उनले युथफोर्स प्रतिपक्षसँग लड्नको लागि भएको भन्दै युथफोर्समा संगठित हुने साथिहरुको सबै जिम्मा युवा संघले लिने बताए ।
उनले युथफोर्समाथि कसैले आक्रमण गरेको अवस्थामा युथफोर्सको सबै साथिहरु अरिगांल जसरी जाइलाग्ने बताए । उनले त्यसको लागि हतियारको चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । उनले तत्काल आफूसँग भएको जे छ, त्यही लिएर उठ्न आग्रह गरेका छन् । आफूले केही नपाउँदा रातो कफन, आफ्नो मुठ्ठी, ढुङ्गा सबै आफ्नो हतियार हुने उनले बताए । तर, आफूहरु यस्तो हिंसामा विश्वास नगर्ने भएकाले हतियारको आवश्यक नपर्ने बताए ।
उनले कांग्रेसले युवा परिचालन गरेर विचल्ली पारेको र माओवादीले वाइसिएल बनाएर चन्दा उठाएको जस्तो युथफोर्स त्यस्तो नहुने बताए । उनले युथफोर्स अनुशासित हुने र जनतासँग जोडिएर जनतासँग पानी र माछाको जस्तो सम्बन्ध बनाएर रहने बताए । ९ गते काठमाडौंमा युथफोर्सले विशाल शक्ति प्रर्दशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
अघिल्लो लेखमाथप १८७५ जनामा संक्रमण, २१६४ जना संक्रमणमुक्त, २१ जनाको मृत्यु
अर्को लेखमानेपाल किन धनी हुन सकेन ?